Qalanjo Ka Mid Ahayd Xidigaha Ugu Caansan Maraykanka Oo Muslimtay | Hawraar
November 2, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Qalanjo Ka Mid Ahayd Xidigaha Ugu Caansan Maraykanka Oo Muslimtay
Qalanjada reer Maraykan Kendra Spears, oo ka mid ahayd dadka ugu caansan xidigaha dalka Maraykanka, horana u shaacisay inay qaadatay diinta Islaamka, ayaa warbaahinta kala duwan ee dunidu ka warantay, sida ay xaaladeedu tahay iyo arrimo badan oo ay ku faraxsan tahay gabadhaasi.
Kendra Spears, oo markii ay Muslimtay uu guursaday, Milyaneerka uu dhalay hogaamiyaha koox diimeedka Ismaciiliyada lagu magacaabo ee dalka Hindiya, tirada ugu badan taabiciyiinteedu ku dhaqan yihiin, waxa lagu maamuusay inay noqoto Amiirad, waxaana loogu magac daray, Amiira Salwa Aga Khan.
Sida jariirada Daily Mail ku warantay, qoyska reer Aga Khan oo ka mid ah kuwa dunida ugu lacagta badan, waxa dumarka ay guursadaan, loo maamuusa si la mid ah boqortooyada Ingriiska, waxaana gabadh kasta oo wiilasha Hogaamiye Aga Khan soo guursadaan, marka ay ilmaha ugu horeeya dhasho lagu magacaaba ama noqotaa Amiirad.
Sidaa awgeed ayay Kendra Spears oo u dhaxday wiilka ugu wayn carruurta Aga Khan ee lagu Magacaabo, Rahim Aga Khan, noqotay Amiirad buuxda oo waxa magaceedu noqon doona, Amiira Salwa Aga Khan, waxaanay lamaanahan Milyaneerka ahi sugayaan dhalashada ilmihii ugu horeeyay ee ay isku dhalaan.
Kaas oo sida warbaahinta Ingiriisku sheegtay, wiil ah dhawaana u dhalan doona, waxaana sida wararku tilmaamayaan, marka ilmahaasi dhasho meelo badan oo dunida ah ka dhici doona, farxado lagu soo dhawaynayo dhalashada ilmaha yar, sababtoo ah taabiciyiinta Dariiqada Ismaaciiliyada ee diinta Islaamku, waa kuwo si wayn ugu xidhan Hogaamiyahooda aadna u tix galiya.
Qoyska reer Aga Khan oo sidaan hore u tilmaanay ka mid ah kuwa dunida ugu qanisan, waxa ay ku nool yihiin dalka Ingiriiska waxaanay hantidoodu kor u dhaaftay kun iyo dhawr boqol oo milyan, sida dadka ka faalooda dhaqaaluhu ku warameen, wiilka curad ee hogaamiye Aga Khan oo ah Rahim Aga Khan, Gabadhanina u dhaxday, ayaa kaligii hantida uu leeyahay lagu qiyaasay inay kor u dhaafayso sideed boqol oo Milyan oo dollar.
Qalanjadan reer Maraykan ee dharka hore u xayaysiin jirtay, Kendra Spears, ayaa muslintay sanadkii hore, xiligaas oo markiiba ay is guursadeen, Amiirka leh dhaxalka Hogaaminta Dariiqada Ismaaciiliyada ee Diinta Islaamka, Rahim Aga Khan.
Dariiqada Ismaaciiliyada ee uu hogaamiyo Aga Khan oo dad badani shaki ka muujiyaan, hab dhaqankooda, waxa ay ka mid tahay, kuwa ugu atbaacda badan, waddanka Hindiya, waxaana ka mid ah dadka ugu maal qabeensan dalkaas iyo dunida Islaamka, gaar ahaan dadka jila filimada Hindiga ah, oo ay ka mid yihiin aktarada waaweyn ee qoyska reer Khan ku abtirsada dalkaas.
Sida sharciga Mad-habta Ismaciliyadu yahay, qof kasta oo ka mid ah wuxuu ku abtirsadaa hogaamiyahooda Aga Khan, waana khasab in magaciisa lagu ladho Magac Khan, taas oo cadaynta ugu horaysa u ah, isla markaana fure u ah in Hogaamiyuhu u shafeeco qaado. Waxyaabaha kale ee ay aamisan yihiin waxa ka mid ah, In salaadaha shanta ah mar qudha la wada tukado.